Ecrebo: Ijikwa ahụmịhe POS gị | Martech Zone
Ọganihu na nkà na ụzụ na-enye ohere dị egwu maka ụlọ ọrụ iji melite ahụmịhe ndị ahịa. Nhazi nke onwe abughi ihe bara uru maka ulo oru, ndi ahia na-ekele ya. Anyị chọrọ azụmahịa ndị anyị na-agakarị iji mata onye anyị bụ, kwụghachi anyị ụgwọ maka nkwado anyị, ma nye anyị ndụmọdụ mgbe njem ịzụ na-aga n'ihu.
Otu ohere dị otú a na-akpọ POS Ahịa. POS na-anọchi anya Oghere nke Ọrịre, yana ọ bụ akụrụngwa ndị na-ere ahịa na-ere iji nweta nyocha. Ọ bụghị ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ nwere iguzosi ike n'ihe usoro na ego kaadị soro ịzụrụ ala n'ji… ma data na-chikọta na-eji mgbe e mesịrị ka ahịa ka ha site na email ma ọ bụ kpọmkwem ozi.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta data ndị ahịa ozugbo ma kpọtụrụ ya ozugbo na nyocha? Nke a bụ ohere na POS Marketing.
Ecrebo bu isi okwu ire ahia nke na enyere ndi na ere ahia aka ibunye ndi ahia ihe ichoro ha na ndenye ego ha ma obu nnata ha. Na ihe karịrị 90% nke azụmahịa na-eme na ụlọ ahịa, Ecrebo's POS based technology na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịnapụta nkwukọrịta ahịa agbadoro ahaziri iche maka ndị ahịa ọ bụla.
Ndị ahịa na-erite uru site na ịnweta onyinye dị mkpa na agbamume nyefere na ụzọ dị mma na nke na-abụghị nke intrusive. Ecrebo ike isi ire ire ahịa maka ụdị ndị ahịa gụnyere Waitrose (nri nri), M&S (ụlọ ahịa ngalaba) na PANDORA (ọla).
Ecrebo POS Marketing Atụmatụ
Kupọns ezubere iche na ndenye ọpụpụ - Nyefee nnukwu mkpa, zụta dabere na ngwa ahịa na ozi ozugbo na ndị ahịa ụlọ ahịa. Drivegbọala na-abawanye ụba ahịa, na-eme ka ịzụ ahịa otu ngalaba dịkwuo elu, ma na-eme ka iguzosi ike n'ihe ndị ahịa dịkwuo elu.
Nnata Dijitalụ Nkeonwe - Nye ndị ahịa gị ụzọ dị mma iji nata ma chekwaa nnata ha. Nnata dijitalụ na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa kwalite ma mepee ọwa ahịa azụmaahịa zụrụ azụ.
PANDORA, otu n'ime ụdị ọla kachasị mma n'ụwa, na-eji Ecrebo ugbu a iji nyefee akwụkwọ ọnụahịa dijitalụ gafee ụlọ ahịa ụlọ ahịa UK dị 220. A na-anata ndị ahịa na-esochi ndị ahịa na-esote azụmahịa ha ma tinye nhọrọ iji họrọ iji nweta akwụkwọ akụkọ oge niile, yana arịrịọ maka nzaghachi ndị ahịa, na-enye ndị ahịa ohere ịkọ maka ahụmịhe ha na-echekwa.
Anyị na-ejikwa nnata dijitalụ dị ka ohere iji rịọ nzaghachi site n'aka ndị ahịa anyị na ahụmịhe ha na-echekwa, na-enyere anyị aka ịnọgide na-emezi onyinye anyị. Jo Glynn-Smith, VP nke Ahịa, PANDORA UK
Ecrebo data na-eriju afọ maka ndị na-echekwa ụlọ ọrụ na isi ụlọ ọrụ PANDORA UK iji nyere ụlọ ọrụ ahụ aka ịghọta etu ụlọ ahịa ha si arụ ọrụ yana ịchọpụta mpaghara ọ bụla maka imeziwanye.
Tags: LeleeKupọns ndenye ọpụpụKupọnsecreboM&SPANDORAkeonweahaziri posnnata nkeonweebe ire ereebe ire ereebe ahịanaaWaitrose
Vision6 integrates Eventbrite maka akwụkwọ ịkpọ òkù na Ọbịa-List Management
Zencastr: Easily Dekọọ Podcast Ajụjụ Ọnụ N'ịntanetị